China steel Support neZilinganisi mveliso kunye nabathengisi | Zhongming
Intsimbi eguqulwayo yaseLuowen isetyenziselwa inkqubo yokuxhasa ngokuthe nkqo kulwakhiwo ukuxhasa umqadi weplanga kunye nefomwork.
Iipropu zensimbi zetelescopic zisetyenziselwa ukufotwa kwefom form kunye nezinye iimfuno zesiza. Ngaba iiprops zensimbi zeteleskopu ezinokuqina okukhulu. Kuxhomekeke kwimodeli yokuxhasa, ukugqitywa kungagalelwa okanye kugalelwe umgubo, kupeyintwe. Ummiselo kunye nokulungiswa koyilo kunika uhlengahlengiso olukhawulezileyo lweprop.
Ukufomatha i-formwork eneepropu kubandakanya ukubeka iiyunithi ezininzi ngokweemitha zesikwere njengoko kufanelekile ukufezekisa ukhuseleko olomeleleyo noluzinzileyo, olunako ukuxhasa ubukhulu be-slab obuchazwe emsebenzini.
I-Steel Prop isetyenziswa kwinkqubo yokuxhasa ngokuthe nkqo kulwakhiwo ukuxhasa ulwakhiwo, olufana nolwakhiwo lomgangatho.
I-Steel Prop ikakhulu yenziwe ngeplate esezantsi, ityhubhu yangaphandle, ityhubhu yangaphakathi, i-swivel nut, ipiniki yecotter, ipleyiti ephezulu kunye nezinto zokugoba i-tripod yokusonga, i-head jack, ulwakhiwo lulula kwaye luyaguquguquka.
I-Steel Prop ilula kulwakhiwo, ke kulula ukudibanisa kunye nokudibanisa.
I-Steel Prop ihlengahlengiswa ngenxa yetyhubhu yangaphandle kunye netyhubhu yangaphakathi, ityhubhu yangaphakathi inokwandiswa kwaye inciphe kumbhobho wangaphandle, emva koko inokuhlengahlengiswa ngokobude obufunekayo.
Ipropu yensimbi inokuphinda isetyenziswe, kwaye nje ukuba ayisebenzi, loo nto inokufunyanwa kwakhona.
IProp yentsimbi inokuhlengahlengiswa kubude obufunekayo ngokobude obahlukeneyo bezinto ezakhiweyo.
Qaphela: Malunga ubukhulu ityhubhu, sivelisa iintlobo ezininzi ubukhulu, ezifana ityhubhu ubukhulu 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, okanye sinokuvelisa njenge wena.
Iipropu zensimbi zeteleskopu zisetyenziselwe ukufota kwiiprojekthi ezininzi zokwakha, kwaye abathengi bethu basazikhetha ngenxa yokusebenza kwazo kunye nokusebenziseka lula. ukubonelela ngokuthembekileyo nokhuseleko kwindawo yokwakha.
Ukuba siqhubeka sijonga umgangatho wezinto ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo, iinkqubo zokuvelisa kunye nonyango lokugqibela olusetyenzisiweyo kwiimveliso zethu, iziphumo ezikwisiza
kuqinisekisiwe. Ezi props ziyilelwe kwaye zenziwa ngokulandela izikhokelo ze-UNE 180201. Yonke idatha eboniswe kolu xwebhu ixhaswa ngu
uvavanyo olunzima olwenziwe kwilabhoratri yethu yovavanyo. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokusebenza ngokuchanekileyo, ukusetyenziswa kunye nokuphathwa kwepropu yensimbi ye-telescopic, nceda unxibelelane, siya kukuvuyela ukumamela imibuzo yakho.
Isibiyeli seBhendi yokuQinisa, Banikwe Screw Adjustable Screw, Metal Cuplock banikwe, Heavy Duty Ringlock banikwe, Ringlock banikwe Izahlulo, Izixhobo zeKwikstage Scaffolding,